विषालु च्याउले ज्यानै लिनसक्छ, सचेत रहनुस् ! « Khabarhub
विषालु च्याउले ज्यानै लिनसक्छ, सचेत रहनुस् !
काठमाडौं–च्याउ एकप्रकारको ढुसीजन्य वनस्पती हो । यसको धागो जस्तो आकारको अवस्थालाई माइसेलियम भनिन्छ । यही धागो जस्तो ढुसीबाट च्याउ आकारको ठूलो फ्रुटिङ्ग बडी निस्कन्छ । च्याउमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्वहरु प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
च्याउमा प्रोटिन, भिटामिन ए, बी, सी तथा क्याल्सियम, फोस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । त्यसैले च्याउलाई एक पौष्टिक स्वास्थ्यवर्द्धक परिकारको रुपमा लिने गरिन्छ ।
प्रकृतिमा अनेकौँ जातका च्याउहरु जंगलमा त्यत्तिकै उम्रिरहेका हुन्छन् । जंगलबाट टिपेर ल्याएरको च्याउ बजारमा बेचबिखन गर्ने चलन पनि छ । आजभोलि कृत्रिम रुपमा व्यवसायीक च्याउ खेती गर्ने किसानहरु पनि बढेका छन् ।
जंगलमा उम्रने सबै च्याउहरु खानायोग्य हुदैनन् । जंगलमा पाइने च्याउ विषाक्त पनि हुन्छन् । विषाक्ता च्याउ पकाउँदा पनि त्यसमा भएकोे विष नष्ट हुदैँन ।
जंगलमा पाइने च्याउहरु हेरेरै खान विषाक्ता छ वा छैन छुट्याउन पनि सकिदैन । त्यसैले पनि नेपालमा विषाक्ता च्याउ खाएर मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका खबरहरु समेत आइरहन्छ ।
विषालु च्याउको यस्ता छन् असर
विषालु च्याउ खाएमा पेट बाउँडिने समस्या आउँछ ।
बान्ता आउछ ।
पखाला लाग्छ ।
सिकिस्त अवस्थामा कलेजो र मृगौलाले काम नगर्ने हुन्छ ।
विषाक्त च्याउने बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ ।
विषाक्त च्याउबाट हुने जोखिमबाट बच्न च्याउको राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र खानुपर्छ । तर च्याउमा विषालु पदार्थ छ वा छैन भनेर पहिचान गर्न निकै कठिन छ । त्यसैले विषाक्त च्याउबाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेको जंगलको च्याउ भन्दापनि घरेलु रुपमा उत्पादन गरिएका च्याउ खानुपर्छ ।
विषालु च्याउ खाएर बिरामी परिहाले के गर्ने ?
विषालु च्याउमा हुने विष हटाउने औषधि विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको छैन । त्यसैले विषाक्त च्याउको विषको असर शरीरमा फैलिन नदिनु नै उपचारको सही तरिका हो ।
विषाक्त च्याउ खाएर बिरामी परिहालेमा होशमा भएको बिरामीलाई विषको मात्रा निकाल्न बान्ता गराउनु पर्छ । यस्तै विषाक्त च्याउ खाएर वेहोस भएका बिरामीलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वास गराएर प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ । प्राथमिक उपचारबाट बिरामीको अवस्था सुधार नभएमा सकेसम्म छिटो अस्पताल नै लैजानुपर्छ ।
विषालु च्याउबारे केही भ्रमहरु
विषालु च्याउ चम्किला हुन्छन् ।
विषालु च्याउले चाँदीलाई कालो बनाउँछ ।
विषालु च्याऊलाई चामलसँग उमाल्दा रातो हुन्छ ।
विषालु च्याउ पकाउँदा, अचार बनाउँदा विष हराउँछ ।
विषालु च्याउ चुच्चा, छतरी आकारका हुन्छन्, खान हुने च्याउ चेप्टा हुन्छन् ।
प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७५, सोमबार ८ : ४८ बजे
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नेपालको हितमा छैन : चित्रबहादुर केसी
काठमाडौँ- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन
‘कृष्ण-लीला’ गीतमा हिमाली सुन्दरता (भिडियो)
काठमाडौँ– शुक्रबार फिल्म ‘कृष्ण-लीला’ मा समावेश नयाँ गीत ‘ए मेरो
दमौली– तनहुँका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि
चितवन– नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ र चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण